Ubaxyo loogu keenayo hay'adaha sharciga wareejinta bangiga ee Moscow | Lacag bixinta akoonka dejinta ee ururka
Bixinta ubaxyada hay'adaha sharciga ah ee bangiga loogu wareejiyo Moscow.
Marabtaa inaad dalbato ubax sida hay'ad sharciyeed. Qof lacag ka bixinaya koonto bangi oo ku taal Moscow?
Dalbashada wareejinta bangigu waa sahlan tahay!
Ma jeceshahay inaad hadda dalbato ubax? - kaliya u dooro bouquet ah Floristum.ru ee magaalada Moscow, iyo bogga dalabka, dooro habka lacag bixinta "Kuwa aan lacagta ahayn ee hay'adaha sharciga ah", buuxi faahfaahinta isla markaana heshiis ayaa isla markiiba laguugu soo diri doonaa boostadaada waxaana la soo saari doonaa qaansheegad.
Miyaad doorbideysaa inaad heshiis horay uhesho oo aad ubaxa ku dalbato lacag horudhac ah? - fadlan noo soo qor waxa aad damacsan tahay: company.floristum.ru/en ama wac: 8 800 600-54-97.
Noocyada ubaxyada ee qiimaha lagu soo bandhigay goobta waxaa loo soo bandhigayaa dadweynaha dalab ganacsi oo ubax ah loogu talagalay hay'adaha sharciga ah.
Faa'iidooyinka la shaqeynta Floristum.ru ee magaalada Moscow loogu talagalay hay'adaha sharciga ah
(dalab ganacsi oo ubax leh oo la keenayo):
Bouquets ayaa maalinba maalinta ka dambeysa laga geeyaa Moscow iyo magaalo kasta oo ku taal Ruushka hal qandaraas.
Markaad dhammeyso hal qandaraas, waxaad dalban kartaa ubaxyo iyo hadiyado magaalo kasta oo ku taal Ruushka oo ay ka shaqeyso Floristum.ru, kuwani waa boqolaal degsiimooyin ay ku nool yihiin macaamiishaada iyo asxaabtaadu!
Bixinta ubaxyada laga helo koontada bangiga ee ururka.
Nidaam otomaatig ah oo fudud oo qaansheegad ah oo ka socda LLC "FLN" (Floristum.ru) ilaa faahfaahinta hay'addaada sharciga ah, iyada oo loo marayo amarka bouquet. Uma baahnid inaad wax ku qorto, wac oo saamax biilka, nidaamka ayaa qaan-bixin ku soo saari doona cinwaanka emaylka aad sheegtay.
Kumanaan kun oo bouquets ayaa diyaar u ah Floristum.ru Moosko!
Ka dalbo magaalooyin kasta magaalo ka mid ah Ruushka! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad sheegto magaalada, dooro bouquet ku habboon oo ubax ah oo sheeg tilmaamaha bixinta.
Qiimo jaban oo ubax ah.
Floristum.ru waa ilo ay ku yaalaan dukaamada ubaxa iyo shirkadaha jumladaha ku bixiya bouquets-yada xirfadeed iyo curinta. Markii aad halkan wax ka adeegato, waad hubi kartaa inaad ka heli doonto bouquet aad u fiican xirfadleyda qiimo jaban.
Hal qandaraas oo laga dalbado kumanaan dukaan ubax ah.
Adoo soo gabagabeynaya hal qandaraas, waxaad fursad u heleysaa inaad ubax ka iibsato shan kun oo xarumood. Boggu wuxuu leeyahay xulasho aad u ballaaran oo ah bouquets dhadhan kasta. Bal qiyaas - in ka badan boqol kun. Oo waxaad iyaga ka iibsan kartaa laba qasabno. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad faahfaahintaada kuxirto qaab ku haboon kaliya halmar, mustaqbalka waxaa si toos ah loogu dari doonaa foomka dalabka.
Ka ilaalinta khayaanada iyo adeegyada tayada liita.
Markaad dalbanayso oo aad bixinayso adeegyada adoo adeegsanaya internetka, ma aha wax adag inaad ku dhacdo khiyaanooyinka khiyaanooyinka oo aad lacagtaada ku lumiso, ama aad si fudud u iibsato adeeg tayo liita. Bogga Floristum.ru wuxuu leeyahay nidaam ilaalin macaamiil ah. Ilaa amarkaaga la dhammaystiro, ubaxa ubaxu lacag kuma heli doono. Tani waxay damaanad qaadeysaa tayada shaqada la qabtay, amniga degsiimooyinka iyo 100% dammaanad ah in loo celiyo macmiilka.
Dukumiintiyada xiritaanka dhib-la'aanta ah.
Faa'iido kale ayaa ah in dukumiintiyada xirmaya heshiiska si toos ah loogu diro xisaabiyahaaga iyadoon la xusuusin. Iska ilow aruurinta rasiidhada, iskaanka, warbixinnada iibsiga. Hada, waxaad si fudud kuheleysaa asalka cinwaankaaga dirista iyo baaritaanada iimaylka. Waa wax fudud oo aad u habboon!
Ma hayno wax lacag dheeraad ah markii aan ka bixinayno koontada hadda jirta.
Qiimaha ubaxyada waxay la mid yihiin shakhsiyaadka. dadka:
Sanduuq ku jira midabyo dhalaalaya oo ah 61 ubax, strawberries 1000 gr., Raspberries 250 gr., Blueberries 250 gr., Currants 250 gr., Blackberries 250 gr.
28250 ₽ Sanduuqa hadiyadda "Sangria"
Hadiyad shaah, shukulaato, shukulaato iyo koob galaas ah ku rid sanduuq lilac oo gacanta lagu sameeyay
3390 ₽ Gift set No. 286
Hadiyad shaaha iyo shukulaatada Belgium -ka ku jirta xirmo xiiso leh oo qaab guri ah
2350 ₽ Gift set No. 288
Hadiyad la dhigay teapot iyo koob, shukulaato iyo lavender
Hadiyad la dhigay shaah, shaah dhoobada ah iyo koob
Jaleecada hore ee bouquet-kan waxaad dooneysaa inaad dhahdo "ah!" ... Ma jiraan wax superfluous halkan, kaliya ubax cas oo ka qaylinaya jacaylka qiiro leh. Dareen aan tirtiri karin iyo raalli ahaanshaha gabadhaada ayaa la damaanad qaaday! Sanduuqa koofiyadaha wareega ee bouquet-ka lagu dhejiyay waxay siineysaa muuqaal casri ah, casri ah oo casri ah. Hadiyaddan oo kale runtii waa la qadarin doonaa!
4594 ₽ Sanduuq leh ubax.
Filim - 2 kumbiyuutar.
Bouquet of-a-ubax cad-qaabeeya cad by David Austin (101 kumbiyuutarada) warqad naqshadeeye naqshadeeye.
51750 ₽ Bouquet of-ubax peony cad (101)
Яркий букет с розами, альстромерией, сантини и краспедией
3650 ₽ Bouquet №337
Букет из ярких пионов в дизайнерской упаковке
3700 ₽ Bouquet of peonies
Xirxirida - 7 pc.
3650 ₽ Bouquet №8
Ku arag dhammaan bouquets qiimo jaban